Ajjeechaan Uummata Oromoo irratti raawwatamu akkaan hammaachuu - Independent Oromia
Dargaggoonni Oromoo baay’inaan jaha ta’an, Konyaa Baha Wallaggaa Ona Gobbuu Sayyoo keessatti Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan ajjeefamuu.
Dargaggoota ajjeefaman keessaa lama ganda Baafannoo jedhamuun waamamu keessaa qabamanii mana hidhaa Magaalaa Aannoo keessatti argamu keessatti hidhamuun dararamaa erga turanii booda Roobii Sadaasa 10, 2021 mana hidhaa keessaa baafamuun ajjeefamuun, reeffi isaanii bakkeetti kan gatame ta’uu.
Odeessa wal-fakkaatuun, ajjeechaan suukanneessaan LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti-fufuun, Jimaata Sadaasa 12, 2021 Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Gimbii, bakka Dhagaa Dhaabbii jedhamutti, daa'imni ganna kudhanii tokko haadha isaa biraa qabamuun ajjeefamuu. Haati isaa reeffa ilma ishee illee akka lafaa hin kaafanne dhorkamuun, reeffi ilma ishee bineensaan nyaatamuu.
Gandeen baadiyyaa Ona Gujii Lixaa keessatti argaman, kanneen baay'inaan 400 ol ta'an WBO'n bilisoomfamuun, Uummanni Oromoo yeroo ammaatti jiruu fi jireenya ofii nagayaan geggeeffachaa jiraachuu.
Harka-kennannaa Poolisoota Humna Addaa
Poolisoonni Humna Addaa [Oromiyaa] kanneen Ona Gimbii fi naannawa san keessa maandheffatanii jiran keessaa torba mootummaa isaan bobbaase ganuun WBO'tti harka kennachuu.